Maraykanka oo uga digay Eritrea hurinta colaadeed iyo dagaal ee Somaliya, uguna baaqay kooxaha Somalida xabad joojin. – Radio Daljir
Maraykanka oo uga digay Eritrea hurinta colaadeed iyo dagaal ee Somaliya, uguna baaqay kooxaha Somalida xabad joojin.
Maajo 15, 2009 12:00 b 0
Washington, May 15 | Qoraal ka soo baxay wasaarada arrimaha dibedda ee Maraykanka ayaa ugu baaqay Eritrea in ay joojiso hurinta colaadeed iyo dagaal ee Somaliya.
Dawlada Eritrea ayaa la sheegay in ay kaalin weyn ka qaadato dagaalada ay wadaan Islaamiyiinta ka dagaalama Koonfurta Somaliya iyo damacooda guud ee ah in ay ka hirgaliyaan Somaliya dawlada Islaami ah oo mayal adag.
Xarakada Xisb al Islaam ee uu hogaamiyo Sh. Xasan Dahir Aways ayaa lagu tiriyaa in ay gacansaar la leedahay Eritrea. Sh. Aways ayaa dhawrkii sano ee la soo dhaafay ay Eritrea fariisin u ahayd, maalmo ka hor dagaalada Muqdishana ku soo laabtay Somaliya.
Xarakada Al-shabaab ayaa iyana ka mid ah ururada diimeed ee taageerada dhaqaale iyo ciidanba u soo marto Eritrea, ahna ururka ugu cududa buuran, uguna mayalka adag kooxaha ka dagaalamaya Somaliya.
Somaliya ayaa muddo ahayd masrax dagaal oo ay ku legdamaan kooxo kala afkaar ah oo la kala safan Eritrea iyo Ethiopia oo dagaal ahli ahi uu 30 sano ka badan ka dhex socday, 20-kii sano ee la soo dhaafayna uu ka dhexeeyey loolan dhuleed oo ay isku hardiyeen labada dal.
Dawlada federaalka ah ee Somaliya ee iyada naf ahaanteeda lagu tirin karo in ay Islaami tahay, dagaaladana qayb ka ah, ayaa waxaa taageera kooxo Islaamiyiin lagu tiriyo, kase mabaad’ii iyo siyaasad duwan Al-shabaab iyo Xisb al Islam.
Qoraalka ayaa sidoo kale ugu baaqay kooxaha ku dagaalamaya Muqdisho xabada joojin, iyo in ay u ogolaadaan hay’adaha samafalku in ay gargaar gaarsiiyaan dadka rayadka ah ee ay dagaaladu saameeyeeen.
Dawlada Maraykanka ayaa taageero dhaqaale, siyaasad iyo ciidanba ugu tabarucda dawlada federaalka ah ee Somaliya.
Jaamac Goobe oo loo magacaabay Hanti-dhawrka guud ee Puntland & G/sare Dayr ku xigeenka ciidanka Daraawiishta.
“420 dhimasho ah; 18,000 barakacay” Wasiirka warfaafinta Somaliya oo ka xog waramay khasaaraha dagaalada Muqdisho.